फेरि लकडाउन ? सरकार भन्छ– ‘के गर्ने तपाईंकै हातमा छ’ – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ फेरि लकडाउन ? सरकार भन्छ– ‘के गर्ने तपाईंकै हातमा छ’
दीप संञ्चार साउन १८, २०७७ गते १९:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकारले १ सय २० दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेपछि यतिबेला जनजीवन सहज बनेको छ । सार्वजनिक बस चल्न थालेका छन् । उद्योग कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा फर्किंदै छन् ।